बागमतीमा एक भोटको कमाल ! काँग्रेस अभागी, एमाले-माओवादी ‘लक्की’ « Bagmati Page
बागमतीमा एक भोटको कमाल ! काँग्रेस अभागी, एमाले-माओवादी ‘लक्की’
हेटौंडा । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा रोचक परिदृश्य देखिएको छ । यो प्रदेशमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनै दलको भूमिका फगत एक भोटमा अड्किएको छ । बागमती प्रदेश सभामा कुल ११० जना सदस्य छन् । नेकपा एकीकृत हुँदा उसँग ८० जना सांसद थिए । पार्टी विभाजनपछि एमालेसँग सभामुखसहित ५७ सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रसँग २३ जना छन् ।
यस प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख इन्द्रबहादुर बानियाँ थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकाबाट हटेसँगै हाल उनको सेवा सुविधा काटिएको छ । एक भोट बढी भएका कारण माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शालिकराम जमरकट्टेलले अब बानियाँले पाउँदै आएको सुविधा उपभोग गर्नेछन् । –गणेश दुलाल / राताेपाटी